Dad Loo Maxkamadeeyay Isku Dayga Dilkii Raysal Wasaare Abiy Axmed – somalilandtoday.com
Dad Loo Maxkamadeeyay Isku Dayga Dilkii Raysal Wasaare Abiy Axmed
(SLT-Addis Ababa)-Dacwad oogeyaasha dalka Itoobiya ayaa maxkamad soo taagay shan qof oo lagu tuhunsanyahay argagixisannimo, iyagoo loo heysto iney isku dayeen dilka ra’iisul wasaare Abiy Axmed ka dib markii bishii Juun ay bam gacmeed ku tureen fagaare uu ku sugnaa.
Ra’iisul wasaaraha ayaa si deg deg ah goobtaas looga kaxeeyay, ka dib markii uu qaraxa dhacay.
Xilligaas waxa uu weerarkaas ku tilmaamay “isku day lagu guul darreystay oo ay sameeyeen xoogag aan dooneyn iney Itoobiya midowdo”.
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionWaxaa fagaaraha isugu yimaaday kumanaan qof oo taageera u ah Mr Abiy
Shanta ruux ee la tuhunsanyahay – oo lagu kala magacaabo Getu Girma, Birhanu Jafar, Tilahun Getachew, Bahiru Tollosa, iyo Desalegn Teafaye – ayaa waxaa wajiyadooda ka muuqday walwal aad u xooggan xilligii ay maxkamadda ka soo hor muuqanayeen, sida uu ku soo warramay wariyaha BBC-da ee laanta Axmaariga Kalkidan Yibeltal.
Ra’iisal wasaaraha oo qudhiisa ka soo jeeda qoomiyadda Oromada, ayaa xilka la wareegay ka dib saddex sano oo ay dalkaas ka socdeen rabshado ay sameynayeen bulshada Oromada, oo dalbanayay in la soo af jaro waxa ay ugu yeereen maamulka ku faquuqayay dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Isbedallada uu sameeyay Ra’iisal wasaaraha ayaa xayiraadda looga qaaday ururkaas oo ay hadda masuuliyiintiisa dib ugu laabteen Itoobiya.